Gịnị Mere O Ji Eme Ntugharị Weebụ? Lee ihe 8 | Martech Zone
Gịnị Mere O Ji Eme Ntugharị Weebụ? Lee ihe 8
Wenezdee, Machị 25, 2015 Wednesday, April 1, 2015 Douglas Karr
Anyị wepụtara a kediegwu video na ihe anabata web imewe bụ na otu ị ga-esi nwalee saịtị gị iji hụ ma ọ kachasị nke ọma maka ikiri na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba. Oge agabeghị gị inweta enyemaka na nke a, enyi anyị bụ Kevin Kennedy na Marketpath kesara ozi ndị dị n'okpuru.
Site na uto dị egwu nke ekwentị mkpanaka dịka ekwentị na mbadamba, yana iji ngwaọrụ mkpanaka, site na egwuregwu, ngwa, mgbasa ozi mmekọrịta, yana weebụsaịtị, ọ dị mkpa ugbu a na ebe nrụọrụ weebụ gị na-agagharị agagharị, ka ndị ahịa gị na atụmanya gị wee nwee ike ịchọgharị n'ụzọ dị mfe. ma chọta ozi, n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ (ekwentị, mbadamba, desktọọpụ, wdg) ha na-eji.
Ebumnuche 8 iji nwee Mmetụta Weebụ na-anabata
Ejiji eji eji aghari ugbu a
Ppingzụ ahịa Na Ngwaọrụ Ekwentị Na-etowanye nwayọ
Social Media na-abawanye ndị nleta ekwentị
Ebe na-anabata ozi ọma ka mma SEO ọkwa
Ntughari Ntughari Na-adaba Na Otutu Ngwaọrụ
Otu saịtị dị mfe iji jikwaa ma bawanye ROI
Saịtị na-anabata ozi na-eweta ahụmịhe onye ọrụ ka mma
Ahụmịhe Blọ Mma Ka Mma - 75% nke ndị America na-eweta ekwentị ha na ime ụlọ ịwụ ahụ!
Uzo ahia bụ usoro njikwa ọdịnaya web nke gụnyere sistemụ njikwa ọdịnaya, ecommerce platform na ịde blọgụ. Ndị otu na Marketpath bụkwa usoro ọrụ zuru oke na ụlọ ọrụ mmejuputa nke nwere ike inyere gị aka mejuputa weebụsaịtị ọhụrụ gị na-anabata!
Tags: infographicahịaịde blọgụ ahịa ahịamarketpath cmsecommerce ahịaanabatanhazi mmeghachi omumena-anabata saịtịanabata web designweebụsaịtị zara ajụjụ
FollowUpThen: Nchetara Email Na-adịghị Mfe